SAWIRO: Madaxweynaha Somaliya oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay shirka Africa Now | Baahin Media
SAWIRO: Madaxweynaha Somaliya oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay shirka Africa Now
Madaxweynaha DFS Mudane Maxamed Cabdulaahi Maxamed ayaa khudbad Dhinacyo BadanTaabanaysay ka jeediyay shirka Afrika Now ee labadii maalmood ee lasoo dhaafay madaxda wadamada Afrika uga socday magaalada Kampala ee Caasimada dalka Uganda.
Madaxweyne Farmaajo ayaa khudbadiisii waxa uu uga hadlay arimo badan oo ay kamid yihiin xoojinta arimaha amaanka,dhaqaalaha iyo isku xir guud oo ay yeeshaan dalalka Afrika.
AKHRISO HADALKII Madaxweynaha.
Waa waajib inaan dadkeenna u suurtagelinno Afrika nabdoon, isdhexgalkeedu sarreeyo isla markaana kobcaysa. Waa arrin ay xaq u leeyihiin. Balse waxa ii muuqata, aniga oo adeegsanaya khibraddeenna ka qaarad ahaan, inaan meesha ka saari karno xiisadaha iyo khilaafyada oo aan qoriga dhigi karno, isla markaana abuuri karno shaqooyin cusub innaga oo kobcinayna dhaqaaleheenna. Afrikaan ahaan, waa inaan awooddeenna xaqiiqsannaa oo aan wax ka beddelnaa mustaqbalka aan wadaagno Ayuu Yiri Madaxweyne Farmajo.